Nagu saabsan - Taizhou Huangyan Shentuo Vehicle Co., Ltd.
Shirkaddu waxay ku takhasustay naqshadeynta, habeynta iyo soo saaridda muraayadaha hore ee baabuurta beytariga wata. Horumarinta tikniyoolajiyadda, shirkaddayadu waxay adeegsataa awooddeena wax-soo-saar, soo-saarayaasha gadaal u-horumarsan ee mootooyinka iyo mootooyinka, iyo qaybaha CNC ee mootooyinka. Waxaan awood u leenahay inaan soo saarno muraayadaha hore ee dhumucyo kala duwan, qaabab, qalab iyo midabbo midab leh. Muraayadaha-muraayaddaha (windscreens) ayaa loo sameeyaa sida ugu dhow ee soo-saarista asalka ah (OEM) si loo hubiyo inay si fiican ugu habboon yihiin mootadaada iyo mootooyinkaaga.
IBX waa nooc ka mid ah shirkadda Taizhou Huangyan Shentuo Vehicle Co., Ltd. Taizhou Shentuo Vehicle Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 1998 waxayna leedahay khibrad ka badan 20 sano. Waxay ku takhasustay soo saarida muraayadaha hore ee mootooyinka iyo gawaarida batteriga. Waxay leedahay waayo-aragnimo wax soo saar hodan ah iyo tikniyoolajiyad hoggaamineed. Waxaan caan ku nahay tayo sare, qiimo tartan iyo xawaare gaarsiin wax ku ool ah.
Sanadihii la soo dhaafay, badeecadeenu waxay si fiican ugu iibinayeen Yurub iyo Ameerika. Badeecada si wanaagsan ayaa loo soo dhoweeyay macaamiisha. Waxaan sameyn doonaa sida ugu fiican inaan rajeyno inaan kuu soo qaadan karno khibrada ugu wanaagsan ee wax soo iibsiga iyo alaabada ugu tayada fiican. Intaas waxaa sii dheer, waxaan aqbalnaa amarrada iyo xigashooyinka dhammaan macaamiisha caalamiga ah. Alaabtu waxay taageertaa tafaariiqda iyo jumlada.
Ku saabsan Customize
Dukaan iyo Jumlo
Midab Iyo Xul Xul
Tilmaamaha la habeeyay ： Waxaad u baahan tahay inaad bixiso sawir-qaadis sax ah, muunado muraayad ama mootooyin. Kadib nala soo xiriir si aad noogu soo sheegtid waxyaabaha ku saabsan, qaabka, midabka iyo tirada alaabta aan dalbanay .Shaqaalaheena farsamada ayaa kuu xisaabin doona oraah macquul ah sida ugu dhaqsaha badan Waxaa xusid mudan in badeecooyinka qaar ubaahan yihiin horumarinta wasakhda, iyo ujro cayiman oo loogu talagalay qalabka wax xoqidda ayaa loo baahan yahay. Waxaan ku siineynaa adeegyo habeysan si aad ula kulanto dhammaan dookhaaga.
Waqtiga la adeegsaday ： laba toddobaad
Tilmaamaha Tafaariiqda ： Si aad u eegto wax soo saarka faahfaahsan iyo qiimaha, riix safka alaabta ee websaydhka. Alaabooyin iyo weydiimo dheeri ah, fadlan na raac Facebook, Intagram iyo Twitter. Bixinta adeegga iibka hal sano kadib, bedel bilaash ah oo ah alaabooyinka burburay hal sano gudahood. Aad ayaan ugu kalsoonahay badeecadayada waxaanan aaminsanahay inay ku siin karto khibrad wax soo iibsi oo tayo leh.
Tilmaamaha Iskaashiga Ganacsi ： Fadlan nala soo xiriir, waxaad heli kartaa macluumaadka badeecada iyo qiima badan oo la doorbido, waxaan noqon doonnaa alaab-qeybiyahaaga ugu fiican.
Midabka Iyo Xulista Waxyaabaha
Xulitaanka midabka ： Waxaa jira midabbo badan oo la kala doorto. Waxaa xusid mudan in nooca sare ee muraayada hore aysan ku talinaynin isticmaalka taargooyinka midabada leh (Maariin, Madow, Cawil qafiif ah, Transparent, Fluorescent yellow, Orange)
PC poly polycarbonate adag ： Xulo waxyaabo tayo sare leh oo adag oo polycarbonate ah, oo leh awood adag, adkeysi qiijiid, adkeysi, mana sahlana in la jabiyo. Waxa ugu fiican saddexda alaab.
PMMA impact Waxyeelada gudaha acrylic ： impact Saamaynta gudaha acrylic-ka waa la xushay, taas oo leh adkeyn iyo tayo ka wanaagsan acrylic-ka caadiga ah. Xagasha muraayada hore ee la soo saaray way cadahay waana boqorka waxqabadka qiimaha.
PVC ： Qaarkooda khafiif ah oo qalafsan, tayada liidata laguma talinayo, laakiin qiimaha waa jaban ..
Shirkad iyo Shahaado
Alaabada Featured - Khariidadda bogga Baaskiilka Gaaska Baaskiilka, Baaskiil Baaskiil Flat ah, Vespa Gts Gtv 300 Boorsada Iskuulka, Muraayada hore ee Honda Nmax, Rakibaadda Iskuulka Kawasaki, Vespa Gts 300 Gtv Rakaabka Shandadaha,